साहित्य/विचार Archives - Page4of6- www.kchhakhabar.com
प्रेमिका -विश्वकर्मा हेम
प्रेमिका _________________ म माथी झ्वाम्म हाम फालेदेखी तिमी किन किन म दह भएँ, हल्लिरहेँ- ढलपल ढलपल म भित्र प्रत्येक कुनाकाप्चा चुपचाप छाम्न दिइरहें किनकी मलाई तिम्रो प्रत्येक स्पर्श प्रेम र जिन्दगीबिचको रहस्यमय खण्डकाव्य लाग्यो बन्थेँ होला हिउँ तर पग्लिरहेँ तिम्रो प्रत्येक स्पर्शको रापले धत् लाटी ! यो त मप्रती तिम्रो प्रेम रहेछ यो त आफ्नै जिन्दगिको हरफ रहेछ म यसरी जम्नुको ...
निलु आफ्नो कलेजबाट घर फर्किँदै गर्दा उनका बाबाको अफिस बाटामै पर्ने हुँदा उनलाई आफ्ना बाबाको अफिसमा पसेर बाबासँगै घर फर्किने मनसाय भयो । उनका बाबा जेलर थिए । जेलर अलि व्यस्त भएका कारणले उनले केही समय पर्खिनुपर्यो । जेलरको अफिस बाहिरपट्टि यताउता निलु डुल्दै थिइन् । एक्कासि निलुका आँखा जेलको ग्रिलको ढोकाबाट भित्रको दृश्यमा पर्यो । टाढैबाट एक निलो टिसर्ट लगाएको कैदीले उनलाई नियालिरहेको थियो । उन...
दुइ मिनेट लाग्छ बिबाहित महिलाले अवस्य पढ्नुहोला !
नेपाली महिला जसको जुन विवाहको बन्धनमा बाँधिएर पतिको रूपमा स्वीकार गरेर आउनुभएको छ । उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध श्रीमान बिदेश गएको छ भनेर स्कुल पढाउने छोराछोरी बोडिङ्ग नहाल्नु होला । कानमा टप, मुन्द्रा र घाँटीमा सिक्रि नखोज्नुहोला आँटो र गुन्द्रुक खाने मुखलाई विगारेर वास्मतिका चामल नखोज्नु होला मोही र गाबाको तरकालीलाई बंग्याएर मासु र हुस्कि र वियरमा मन नडुलाउनुहोला । गाउँका घरछोडेर बजारको मंगो कोठा भा...
म कसैको पत्नी किन बन्ने ?
अञ्जना भण्डारी जब घरमा छोरीको जन्म हुन्छ उसलाई घरको लक्ष्मी भनिन्छ । हुन पनि, उमेर नपुगुन्जेल बाबुको घरमा अनि उमेर पुगेपछि पतिको घरमा सेवा गर्ने एउटी छोरीको प्राकृतिक नाता कस्तो हो बुझ्न कठिन छ । जन्मिदा एक्लै जन्मिए पनि धर्तीमा आइपुगेपछि विभिन्न नाता सम्बन्धमा गाँसिन पुग्छे । कसैकी छोरी, कसैकी दिदी, बहिनी त कसैकी नातिनी । नाता पनि के के हुन् के के लगाएर साध्य छैनन् । अनि रितिथिति – चालचलनमा छोरी ...
- कृष्ण बस्नेत "भाग्य" आरुबारी, काठमाडौँ / हरिहर बाजे गाउँका जान्ने बुझ्ने मान्छे, अलि सज्जन भनेर पनि चिन्छन सबैले | उनका दुई छोरी मध्ये जेठी छोरी भन्सारको पिउनले भगाएकाले कान्छी भने आफैले कुल घरानहेरेर मास्टर बेद प्रकाशका कान्छा छोरा लिलामणि जो भुमिसुधारमा ७ बर्ष सुब्बा भै मालपोतमा १२ बर्ष देखि अधिकृत रहेका छन् एक इमान्दार, ईज्जतको जागिरे भनेर उनैलाई जेठी श्रीमती मरेपछि कान्छीको रुपमा बिहा गरि...
जब म जादैछु पागलताको बाटो सारा जिन्दगीको एक्लो निर्णय लिएर जब म जानेछु तिमी चुपचाप फुल अगालिरहेको मलाई पाउनेछौ माया क्षितिजको देशमा फूलिरहेको तिम्रै अनुहार तिमी पागल बस्तीमा आफ्नै मुटु उधारेर खोजिरहेको धोइरहेको आसुहरुले तिमी गएको बाटो र आफ्नै जीन्दगी तिमीले छोडेका अक्षरहरु कोट्याइरहेको तिमी मेरो पागलपन देखेर मुस्काउली तिमीले सोचौलि पागलहरुको बस्तीमा पागलहरु चिच्याई चि...
‘महिलाहरू कसैका खेत होइनन्, मन लागेको बेला जोत्न पाइने’
लियो गंगा दाहाल, राजनीतिमा महिलाहरुको भुमिकाको चर्चा सधै भइरहन्छ। राजनीतिमा महिलाहरुको भुमिका कहिले पर्दा पछाडी हुन्छ त कहिले अगाडी । कहिले महिलाले राज्यसत्ताको उपयोग गर्छन त कहिले राजनीतिले महिलाहरुलाई बस्तुको रुपमा प्रयोग गरेर राजनीतिलाई प्रभावित गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्ताको प्रयोग गर्ने महिलाहरू अत्यन्तै न्यून छन्। राज्यसत्ता र राज्यसत्ताका नाइकेहरुले प्रयोग गरेका महिलाहरुको संख्या...
यतिनै गर्न बाबुरामले पीएचडी गर्नै पर्ने थिएन !
डा. बाबुराम भट्टराई अहिले ने.क.पा.एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली विरुद्ध सुरुवाल खोलेर पाँडेगालीमा ओर्लिएका छन् । लाहानबाट सुरु हिमाल,पहाड,तराइ र मधेस नयाँ शक्ति पार्टी अभियानका क्रममा देख्नेलाई समेत लाज लाग्ने गरी तारन्तार ओली विरुद्ध बाबुरामको बर्बराहट सुनिन्छ । कतिपय अनलाइन तथा छापा पत्रिकाले बाबुरामको निकृष्ट बोलीवचनको बेहोरा उल्लेख गरेका छन् । तर बाबुरामले यति निकृष्ट...
साइला फेरी परदेश गयाे
नमस्कार हजुर, आरामै हुनु हुन्छ बुवा ? आरमै के भन्नू र बाबु बाचिय्कै छ । तिमीलाई चिन्न सकिन नि को हौ तिमी ? म ... को साइलो छोरो हो । सानोमा देखेको बडेमानको भएछौ तिमी कहाँ छौ, आज भोलि ? जागीर कता गरेको छौ साइला ? कतार तिरबाट आएको बुवा । कति को छुट्टी आयौ ? अब नजानु पर्ला भन्ने सोच छ बुवा, बिदेशमा सारै दु:ख र गर्मी हुन्छ बुवा । यतै केही गरुकी सोच्दै आको बुवा । के गर्ने विचारमा छौ...
सम्झना , निरन्तरता र प्रेम
मैले आजको दिन सम्ममा जानेको जानकारी हो यो । संझनु , निरन्तरता दिनु र प्रेम गर्नु । हो दिनभर का बिषय सुत्नुपुर्व सम्झनु पर्छ । संझने क्रम निरन्तर हुनुपर्छ । यसले बिषयलाइ प्रेमपुर्वक ग्रहण गराउन मद्दत गर्छ । जब यसरी कुनै बिषय वा ब्यक्ति लाई लिइन्छ त्यो अवचेतन मनले स्विकार्छ । अवचेतन मनले व्यवहारलाई निखारता दिदै प्रेमको बिकास गराउछ । जस्तो कि हरेक दिन अध्ययनको बिषय संझनु र त्यसको निरन्तरता सुत्नुअघि ...